Usoro mgbochi na njikwa ọrịa ụlọ ọrụ
Iji mejuputa mmụọ nke ntuziaka dị mkpa nke odeakwụkwọ ukwu Xi Jinping na mgbochi na njikwa nke oyi baa na New Coronavirus, anyị haziri atụmatụ ọrụ dị ka akwụkwọ ndị dị mkpa na nzuko chọrọ nke State Council, ógbè a. ..
Maka onye na-ede blọgụ mara mma ọkachamara, ọ nweghị ahịhịa etemeete dị ka enweghị chopsticks mgbe ị na-eri nri. Ngwá ọrụ kachasị mkpa maka itinye etemeete bụ brush etemeete. Iji meziwanye mma etemeete, n'ezie, ihe kachasị mkpa bụ iji brushes etemeete maka akụkụ ọ bụla nke etemeete. Enwere ọtụtụ ụdị brushes...
nkuzi etemeete mmalite
site admin na 20-07-14
Nke mbụ, akụkụ bụ isi ka dị ezigbo mkpa maka onye novice. Nzọụkwụ mbụ bụ n'ezie na-asachapụ ihu (na-eteta n'ụtụtụ iji sachapụ oke mmanụ na ọsụsọ na ihu). Akụkụ nke abụọ bụ ịsacha mmiri na ude mmiri ara ehi (karịsịa moisturize ihu. Dị ka akpụkpọ kpọrọ nkụ, ọ bụrụ na nzọụkwụ a ...
MURAN na "COVID-19"
N'oge ọrịa a na-efe efe, ụlọ ọrụ anyị malitere mmụọ nraranye nke "na-ewere obi m" na-eje ije na "ọchịchọ", na-enye aka na ọrụ afọ ofufo na ọha mmadụ, na-ebunye ọkụ na okpomọkụ na ọha mmadụ a, na-agbakwụnye mmetụta nke ịhụnanya na ọha mmadụ, Oge na-enye ọtụtụ ihe. W...
Akwụkwọ ozi ịja mma
E guzobere Yiwu Muran Import na Export Co., Ltd na 2009, nke dị na isi obodo ụwa nke obere ngwa ahịa-Yiwu, China Ụlọ ọrụ ahụ na-emejuputa njikwa sayensị mgbe niile ma na-ekwusi ike na "àgwà mbụ" iji merie ahịa ahụ, ọ dịkwa mma. nke ọhụrụ na ochie c...